Aung San Suu Kyi sponsors short film festival | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Events/Fundraise » Aung San Suu Kyi sponsors short film festival	15
Aung San Suu Kyi sponsors short film festival
Posted by kai on Nov 10, 2011 in Events/Fundraise, Movies/TV | 15 comments
ယူအက်စ်ကလူတွေလည်း ၀င်ပြိုင်လို့ရတာမို့ သတင်းတင်ပေးလိုက်တာပါ.။
ဒါကိုသတင်းဌာနတွေလည်း ဖြန့်ပေးစေချင်ပါကြောင်း..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီးကျင်းပမည့် 'လွတ်လပ်ခြင်း ရုပ်ရှင်ပွဲတော်' အတွက် ရုပ်ရှင်ကားတိုများနှင့် မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ကားများကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တွေ့ရစဉ်။ ၎င်းပွဲတော်ကို ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်မှ ၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ - ဘူးသီး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးစီးပြီး ရုပ်ရှင်ကားတိုပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်
အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၄၂ ( ၄ – ၁၀ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၁)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီးကျင်းပမည့် ‘လွတ်လပ်ခြင်း ရုပ်ရှင်ပွဲတော်’ အတွက် ရုပ်ရှင်ကားတိုများနှင့် မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ကားများကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တွေ့ရစဉ်။ ၎င်းပွဲတော်ကို ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်မှ ၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံ – ဘူးသီး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီးကျင်းပမည့် လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲ တော်အတွက် ရုပ်ရှင်ကားတိုများနှင့် မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင် ကားများကို စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါပွဲတော်ကို လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်မှ ၄ ရက် နေ့အထိ ပြပွဲနှင့်ပြိုင်ပွဲ တစ်ပါတည်း ပူးတွဲကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ပွဲစတင်မည်ဟု ကြေညာသည့် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ပင် ပြိုင်ပွဲဝင်ကားပေါင်း ၁၆ ကား လက်ခံရရှိ ခဲ့ကြောင်း ပြပွဲကျင်းပရေး အဖွဲ့မှ လူရွှင်တော် ဇာဂနာက ပြောသည်။
လွတ်လပ်ခြင်းအပေါ်ဖွင့်ဆိုမှုကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးဖန်တီးထားသည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများမှတစ်ဆင့် ပြည်သူများအကြား လွတ်လပ်ခြင်း၏ အနှစ်သာရနှင့် အတွေးအခေါ် အယူအဆများ ပျံ့နှံ့စေရန် ရည်ရွယ် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါပြပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ဖွင့်ဆိုရေးသားထားသည်။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်နေရာကိုမူ လက်ရှိတွင် ရွေးချယ်ရသေးခြင်းမရှိဘဲ
မီနီရုပ်ရှင်ရုံငယ်ပါရှိသည့် တော်ဝင်စင်တာကို အကြမ်းဖျင်း ရွေးချယ် ထားသည်။
ထိုပွဲတော်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကြံပြုချက်၊ ငွေကြေးစိုက် ထုတ်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ (ဇာဂနာ) နှင့် ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့က အကဲဖြတ်ဒိုင်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်လိုသူများသည် လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုကို ရိုက်ကူးထားသည့် မိနစ် ၃၀ ထက်မပိုသော ရုပ်ရှင် နှင့် မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ကားကို ဒီဗီဒီချပ်ဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ထက် နောက် မကျစေဘဲ အလင်းတန်းဂျာနယ်သို့ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဇာတ်ကားတိုင်းတွင် အင်္ဂလိပ် စာတန်းထိုးပါရှိရန် လိုအပ်ကာ ဆုရသူများအား အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းဆု၊ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုဆု စသဖြင့် ရွေးချယ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် ရုပ်ရှင်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်ကာ ဒုတိယနှင့် တတိယဆု များကိုလည်း ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထိုဆုများကို ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
“ပြည်ပကသူတွေလည်း လာပြိုင်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားနဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသားကိုပဲ ဦးစားပေး ရမှာပါ”ဟု ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဂျာမနီ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတို့မှ ၁၃ ကား ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဇာဂနာက ပြောသည်။
“ရုပ်ရှင်ကားတို ရိုက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့ဝါသနာတစ်ခုပါ။ ဟိုးအရင်ကလည်း ရိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ကားတွေကိုတော့ ဒီပွဲမှာ ပြဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုပြပွဲခေါင်းစဉ်နဲ့လည်း မညီလို့ပါ”ဟု ဇာဂနာက ပြောသည်။
ယခုပြုလုပ်မည့် ရုပ်ရှင်ကားတိုပြိုင်ပွဲတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ ဦးကျော်သူ ကလည်း ရုပ်ရှင်ကားတိုတစ်ခု ရိုက်ကူး ပြသပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်းလည်း ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
“ရိုက်ဖြစ်မှာက နှစ်မိနစ်နဲ့ သုံးမိနစ်ကြား ဇာတ်လမ်းတိုပါ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပါဝင်မည့်အကြောင်းအရာများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ရေးသားထားသည်။
ရွေးချယ်ခံရသည့် ဇာတ်ကားများအားပွဲတော်ကျင်းပသည့်ကာလအတွင်း ပြသသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုအဖြစ် ကျပ် ငွေ ၁၀ သိန်းပေးအပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
ထို့ပြင် ဆုရရုပ်ရှင်များအား သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင် ပွဲတော်များသို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပြီးလာမည့် ဇန်န၀ါရီလ ၂၉ ရက် နေ့တွင် ပြိုင်ပွဲဝင် ဖန်တီးသူများနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ပညာရှင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း ပြုလုပ် သွားမည်ဟု သိရသည်။
kai says: “လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ” ရုပ်ရှင်ပွဲတော် တဲ့..
ယူအက်စ်မှာလည်း နောက်တပါတ်မှာ မြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရှိပါတယ်..။
သတင်းအသေးစိတ်တင်ပါဦးမယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1531
ကိုရင်စည်သူ says: သဂျီးအိုင်ခူး
သက်မွန်လေးက ကိုယ်နဲ့ ဟိုတလောက ကွဲလုိ့
စိတ်နာပြီး ကပေါက်ဖော် အိမ်နောက်နားက မြောင်းဘေးမှာ
ခုတော့လည်း ကိုရင်ကို စိတ်နာနာနဲ့
သဂျီးတို့ဆီ ထွက်သွားပြီး ထင်ပ…
ဟိုရောက်ရင် ကိုရင်မျက်နှာနဲ့ သေချာဧည့်ခံလိုက်ပါနော့… :D :D :D
kai says: ချင်းဇာတိနွယ်တွေ ယူအက်စ်မှာများတာမို့.. သက်မွန်မြင့်တော့.. တော်တော်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတာပဲ..။ဧည့်ခံဖို့ကတော့ မပူနဲ့.. သူတို့တာဝန်ယူထားတယ်..။ ပြန်တောင် လွှတ်ပါ့မလားမသိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 93
TTCG says: “ပြည်ပကသူတွေလည်း လာပြိုင်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားနဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသားကိုပဲ ဦးစားပေး ရမှာပါ”ဟု ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးက ပြောသည်။
တစ်မျိုးကြီးပဲ… အရည်အချင်းကို အမှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလား??? ပြည်ပကလူတွေကို ဦးစားမပေးဘူးဆိုရင် အစကတည်းက ၀င်ပြိုင်ခိုင်းဘို့ မသင့်ဘူး… ကြာရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကလူတွေ “အိမ်ကျယ်” တွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်… ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဟုတ်ကြီးထင်သွားရင် ဒုတ်ခ
ပြိုင်ပွဲဆိုမှတော့ ၀င်ပြိုင်တဲ့လူတိုင်းကို တစ်ပြေးညီ ဆုံးဖြတ် အကဲဖြတ်သင့်တယ်… ဒါမှလည်း စစ်မှန်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့လူတွေ ထွက်လာမှာပေါ့
inz@ghi says: ထောက်ခံတယ်ဗျ….
ဘယ့်နှယ့် လွပ်လပ်ခြင်းလည်းပြောသေး …လူမျိုးရေးလည်း ခွဲခြားသေး….
ငွေ၁၀သိန်း ကို တိုင်းရင်းသားပဲ ရစေချင်တဲ့ စေတနာကိုတော့
မြင်မိပါရဲ့ ဒါပေသိ …
ကြောင်ကြီး says: ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု အကြံအစည်များကို အားပေးချင်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည်ပနေသူများမှာ အဖက်ဖက်က အားသာချက် ရှိထားတယ်လေ။ အဲသလို မြေတောင်မမြှောက်ပေးရင် အညွှန့်လေးတွေ အပင်ပေါက်လာနိုင်ပါ့မလား။ မပြိုင်ခင်မှာကထဲက စိတ်လျော့သွားရင် ဘယ်နှယ်လုပ်မလဲ။ ထင်တာပြောကြည့်တာပါ။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ရွာသားကြောင်သတ္တဝါများကလည်း ကြောင်တွေအကြောင်း ရိုက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလား။ အလကား လေကျယ်ပြီး ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့ဟာတွေ။။။
Foreign Resident says: ” ပြည်ပကသူတွေလည်း လာပြိုင်လို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားနဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသားကိုပဲ ဦးစားပေး ရမှာပါ ”
အခုခေတ်ကြီးမှာ ငွေ ၁၀ သိန်းဆိုတာ ဘာမှကို မဟုတ်တော့တာပါ ။
ပြိုင်တဲ့သူတွေကလည်း ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက်ပဲ ပြိုင်မှာပါ ။
နိုင်ငံခြားသား နဲ့ တိုင်းရင်းသား တန်းတူဖြစ်ရပါမယ် ။
နို့မို့ရင် ပြိုင်ပွဲရဲ့ အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားပါမယ် ။
နိုင်ငံတကာက အထင်အမြင် သေးသွားမယ် ။
မြန်မာတွေ တွေးတာခေါ်တာ နဲနဲ လိုနေသေးတယ် ။
ထီကနဲဆိုရင် တချက်လွဲ ပြစ်လိုက်ပြီ ။
ဒါတောင် ဒီလူတွေက လူကောင်း တွေနော် ။
ပေါက်ဖော် says: ပေးပို့ ထားလို့ ..လက်ခံရရှိထားတာ စုစုပေါင်း ၁၆ကား..
အဲအထဲမှာ..ပြည်ပက ပို့ ထားတာ..၁၃ ကား.. ဆိုတော့…
အနော်တို့ ကို ဦးစားပေးကြပါခင်ညာ….ဦးဇားပေးကြဘာ..
MaMa says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးစီးပြီး ရုပ်ရှင်ကားတိုပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်ဆိုတာကို ပြည်တွင်းမှာနေပြီး သဂျီးပြောမှပဲ သိရတော့တယ်။ အဲဒီကားတွေ (ဆုရကားတွေအပြင် ပြိုင်ပွဲဝင်ကားတွေ) အားလုံးကို ပြည်သူတွေ ကြည့်ခွင့်ရမလား သိချင်ပါတယ်။
TTNU says: ဒီ ပြိုင်ပွဲလေးကျင်းပဖို့ ကိုဇာဂနာက (တိမ်ပေါ်မှအတွေးများ) လို့ပြောပါတယ်။ သူလွတ်လာတော့
လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာရလာတဲ့ စိတ်ကူးပါတဲ့။ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် (The Art of Freedom
Film Festival) မှာ ( Documentary Film and Short Film) နှစ်မျိုးခွဲပြိုင်မယ် ၊ ဆုတွေကို ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင်
ချီးမြှင့်မယ်၊ ဆုရ ရုပ်ရှင်တွေကို နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များသို့ ဆက်ပို့ပေးမယ်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ
နယူးရော့ခ် မြို့ သို့စေလွှတ်ပြီးရုပ်ရှင်ပညာသင်ကြားစေမယ်၊ စတဲ့ သတင်းစကားတွေက အနုပညာ
သမားတွေကို တကယ့်ကို inspiring လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေအပြင် ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ ဝင်ပြိုင်ရင်လည်း ကောင်းတာပါပဲ။
ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်နေနေ မင်းဟာမြန်မာဆိုတဲ့ သူတို့ ရင်ထဲကို လှမ်းမြင်ခွင့်ရတာပေါ့။
kai says: အဲဒီပွဲဆုရသူကို ယူအက်စ်မှာ မြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော်လုပ်နေတဲ့ အသင်းကစပွန်ဆာလုပ်ပေးလို့ ရနိုင်ပါတယ်..။
ယူအက်စ်က မင်နီဆိုးတားရုပ်ရှင်ပွဲတော်လည်း တင်ပေးလိုက်လို့ရနိုင်ပါတယ်..။
ညှိပေးဆို ညှိပေးနိုင်တာမို့.. မြန်မာပြည်ထဲက.. ဘယ်သူနဲ့ ဆက်သွယ်ရမလည်း သိချင်သား..။ ကိုဇာဂနာနဲ့မေးရင်ရမှာလားမသိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1365
TTNU says: ကိုခိုင်
တီချာက ခင်သန်းနု/ မေသန်းနု ဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်နယ်နဲ့ အနီးစပ်သားလူကလေးရဲ့ ။
ကျုပ်က ဒေါ်သနု …ရုပ်ရှင်နယ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗေလုဝ နဲ့ တောင်မသိဘူးကွာ။
ကိုခိုင် အတည်ပြောတာဆိုရင်တော့ ကိုဇာဂနာ / ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ ကို မေးရင်
ကောင်းမယ်နော်။ ကြည်ဖြူရှင် လည်း ဆရာမောင်ဝသုန်ကောက်ကြောင်းDocumentary
ရိုက်ပြီး ပြည်ပမှာ ဆုရဖူးတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။
kai says: သတင်းအသစ်လေးတွေ.. ဆက်စပ်ဖတ်လို့ရအောင်တင်ပေးတာပါ..။
လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာပွဲတော်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဲဒီပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၂ခု ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက် ကနေ ၄ ရက် အထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး ဆုရဇာတ်ကားတွေကို ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ဆုချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးမြင့်နဲ့ ကိုဇာဂနာတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပုံနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာပွဲတော်မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဇာတ်ကားတွေကို ဆင်ဆာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ အညီ ကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် ဇာတ်လမ်းတိုတွေကို ဆင်ဆာတင်ပြဖို့ အစီအစဉ် ရှိမရှိ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး ကို မေးမြန်းရာမှာ-
“ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလဲဖို့ လုံးဝရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲနေ့က ကိုသူရ ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဆင်ဆာဩဇာ တစ်ခုခု သက်ရောက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး”
လွပ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို ပြိုင်ပွဲကို မူလအစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ပွဲမစခင် အကြိုနေ့မှာတော့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက တာဝန်ရှိ လူကြီးတွေကို ဖိတ်ကြားဖို့ အစီအစဉ် ရှိနိုင်ကြောင်း ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးက ပြောကြားပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးကို ဦးသစ်ဆင်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့တာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
maungmoenyo says: ဒီကိစ္စမြန်မာသတင်းစာတွေထဲမှာဖတ်လိုက်ရတော့ ကိုယ့်မျက်စေ့တောင်ကိုယမယုံဘူးဖြစ်သွားတယ်။ မသိမသာခြေလှမ်းတွေကနေ သိသိသာသာဖြစ်လာပြီနော…..
maungmoenyo says: ဒါတွေက ထိပ်ဆုံးကခွင့်ပြုလိုက်မှဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလေ…။ သတင်းကတော့စာတပိုဒ်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒိနောက်ကွယ်မှာ အဓိပ္ပါယ်အများကြီး ပါလာပြီဘဲ။
Comments By Post``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - အလင်း ဆက် - သူကလေးအတု - အလင်း ဆက်သူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteရွာသူ/သားများ အတွက် - Ko chogyi - mee layနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - mee lay - Mr. MarGa၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Mr. MarGa - မင်းမင်းမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - ko pauk mandalayရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - kaiဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - အရီးခင်လတ် - KZအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Mr. MarGa - Wowအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - Mr. MarGaကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ -etone - kyeemiteအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာမန္တလေးမြို့ကအစားအသောက်တွေ - KZ - kaiအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - အရီးခင်လတ် - ဦးကြောင်ကြီးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Myo Thantမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - ရဲစည် - မောင် ပေ``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ခင် ခ - Munetezအိပ်မက်မင်းသမီး - Myo Thant - သူကလေးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities